ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာမတ်ခ်တူးများ | တိုယိုတာမတ်ခ်တူးကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
A/C: Front (127)
Cassette Radio (124)
Toyota supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Toyota Mark II 2001 comes withaAutomatic transmission system as well as ot...
ဒီToyota Mark II 2002 ဟာ Lks155 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 150000ကီလိုမီတာ၊ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်သောဂီယာ နဲ့အတူ တခြားကောင်းမွန်‌သော ကားပစ္စည်းများပါတာ‌ကြောင့် အရမ်းတန်တဲ့ကားပါ...
White Toyota Mark II 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 174 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Mark Il 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl Gold Toyota Mark II 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Mark II 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Pearl gold Toyota Mark II 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Lks 147 ညှိနှိုင်း
Toyota Mark II Grande 1999
Lks 149 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Mark II Grande 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Silver Toyota Mark II 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Blue Toyota Mark II 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
တိုယိုတာ မတ် တူးများ
ပြည်တွင်းမှာ ဂျပန် ဆလွန်ကားများ စတင် ခေတ်စားကာ ပြည်တွင်းမှ မော်တော်ကားများ ပြည်ပမှ မှာယူပွင့်လင်းလာချိန်တွေ ပြည်တွင်းမှာ တော်တော်ကို တိုယိုတာ မတ်တူးမှ မတ်တူး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ယခု ဆီစား သက်သာတဲ့ ဟတ်ဘတ် ၁၃၀၀ စီစီကားလေးများ ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာတော့ မတ်တူးတွေဟာ အနည်းငယ် တွေ့မြင်ရတာ နည်းပါးသွားပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မတ်တူးတွေဟာ ၁၈၀၀ စီစီနဲ့ ၂၀၀၀ စီစီလောက်ကနေပြီး စပြီး အင်ဂျင်ပါဝါတွေ ရှိကြလို့ပါပဲ။ ပြည်တွင်း လူထုက ဆီစားသက်သာတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဆလွန် ဖင်ရှည်ကားတွေထဲကတော့ အင်ဂျင် သေးတာကို ရဖို့ သိပ်လွယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအတွက် ဆလွန်တွေဟာလည်း သူအသုံးဝင်မှုနဲ့ သူရဲ့ ဒီဇိုင်း အနေအထားမှာ နေရာ တစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ၁၉၉၆ ကနေ ၂၀၀၀ မော်ဒယ် ဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက် ၈ ဆက်မြောက်ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၇ ထိ ထုတ်တဲ့ မျိုးဆက် ၉ ဆက်မြောက် ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဌင်းတို့ရဲ့ နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်အနေနဲ့ အပြင်ဖက် ဒီဇိုင်းမှာ အနည်းငယ် ပိန်ပါးပြီး ရှည်ထွက်သွားတာကို မော်ဒယ် ဟောင်းတွေမှာ တွေ့ရမှာပါ။ မော်ဒယ်အသစ်က ယခုမှာယူ တင်သွင်းမှုနဲ့ အကိုက်ဆုံးဖြစ်ကာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၇ ထိ ကားတွေကို စလစ်နဲ့ ကပ်ပြီး သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ မတ်တူးတွေဟာ ဆီဒန် အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပြီး ဂျပန်မှာ ၁၉၆၈ ကနေ ၂၀၀၄ ခုနစ်ထိ ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မတ်တူးတွေကို ပြည်တွင်းမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တိုယိုတာမတ်တူးများ ဟာ အရင်တုန်းက တိုယိုတာ တံဆ်ိပ်ထဲ မှ နာမည်ကြီး လူကြိုက်များ တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး ဟွန်ဒါ နဲ့ နီဆန်း တို့လို လူကြိုက် များတဲ့ တံဆိပ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း အတွေ့ရများတဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မတ်တူးတွေမှာ အင်ဂျင် စွမ်းဆောင်ရည်က ၂၀၀၀ စီစီကနေ ၂၅၀၀ စီစီထိ ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေသာ ဖြစ်ပြီး တာဗို့အင်ဂျင်ပါတဲ့ ၂၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါး ၄ပေါက် ဆီဒန်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မတ်တူးတွေကပိုပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ဆန်းသစ်လာပါတယ်။ ဆီဒန်ဖြစ်သည့်နည်းတူစွာ ရှေ့ဘောနပ်နဲ့ အနောက်တွေမှာ အနည်းငယ်ပိုပြီး ရှည်လျားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်မော်ဒယ်တွေနဲ့ အတွင်းခန်းမှာ သိပ်ပြီး ပြောင်းလဲတာတော့ မရှိပါဘူး။ ကျွန်းခွက် ဟိုက်လိုက်ခ်တွေ မြုပ်ပြီး တံခါးတွေကလည်း ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ အတွင်းခန်းမှာ တီဗီပါတဲ့ ကားတွေ ရှိသလို မပါတဲ့ ကား ဂရိတ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ စီယာတိုင် လက်ကိုင်မှာလည်း ကျွန်းခွက် ဟိုက်လိုက်ခ်တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်း များ အနေနဲ့ တီဗီ၊ ပါဝါ လောခ့်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ ဒရိုင်ဘာနဲ့ ခရီးသည် လေအိတ်၊ အန်တီလော့ခ် ဘရိတ်၊ ပါဝါ ၀င်ဒိုး၊ ပါဝါ ထိုင်ခုံ၊ ကတ်ဆတ်ရေဒီယိုစတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဂရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ မတ် တူးကားတွေဟာ ဆလွန်းကားတွေထဲမှာ ကားတွေ စစ၀င်ဝင်လာခြင်းမှာ အတော်ကို တွင်ကျယ်တဲ့ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းမှာ ကျယ်ဝန်းပြီး ကား အပြင်ဖက်က နောက်မြီး ရှည်ရှည်နဲ့ လှပပါတယ်။ ရွှေငါးတွေလိုလည်း နာမည်ပြောင်ပေးထားပါတယ်။ အတွင်းခန်းက ကျွန်းခွက်တွေနဲ့ အရင် က လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ၁၃၀၀ စီစီတွေ ပေါ်လာပြီးမို့ဌင်းတို့ဟာ အနည်းငယ် နစ်မြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်စီး အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ်အတွက် မော်ဒယ် ၉၉ ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထိကို ကျပ်သိန်း ၁၀၀ကနေ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထိ ဈေးအစားစား ရှိနေပါတယ်။ စလစ်အပါအ၀င် အပြီးအစီး ဈေးနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်တွေကို ဂျပန်လေလံကနေလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း ကားဈေးကွက်က လည်းကောင်း ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ၁၃၀၀ စီစီကားတွေထက်စာလျှင် ဆီစား အနည်းငယ် မြင့်တဲ့ ကားတွေ ဖြစ်တာက လွဲပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလွန်းကား သဘောကျ နှစ်ခြိုက်သူများအတွက် တိုယိုတာ မတ်တူးများက အသင့်ရှိနေပြီး စုစုပေါင်း လူငါးယောက် စီးနင်းကာ အဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်မဲ့ကားတွေပါပဲ။ မတ်တူးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်း မှာကတော့ ရွှေငါးလို့ နာမည်ပြောင်ခေါ်တာကို အမှတ် အသိတစ်ခုအနေနဲ့ ကြားမြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။